တရုတ်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော AC film capacitor စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | CRE
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Power capacitors DC-link ဆားကစ်များတွင်အသုံးပြုသည်
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းအဘို့အမြင့်ဗို့ DC ကရုပ်ရှင် capacitors
မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရုပ်ရှင် UL certifica နှင့်အတူ ...
DC စစ်ထုတ်ခြင်းအတွက် UL Certified Film Capacitor (DMJ-MC)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုသက်ဆိုင်မှုအတွက် metalized film capacitor ...
Defibrillator အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Metalized Film Capacitor ...
မြင့်မားသောဗို့အားတွင်အသုံးပြုသော Polypropylene Snubber Capacitors ...
မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသော IGBT Snubber capacitor ဒီဇိုင်း ...
မြင့်မားသော Pulse ဝန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် snubber
မြင့်မားသောလက်ရှိ snubber ရုပ်ရှင် capacitors များအတွက်ဒီဇိုင်း ...
လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအတွက် DC DC link film capacitor ...
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း Hybrid & Electric Vehicle Capaci ...
ပါဝါအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် GTO snubber capacitor
Tract ရှိ IGBT-based converters များအတွက် DC bus capacitors ...
ရထားလမ်းဆွဲခြင်းအတွက်သီးခြားပြုလုပ်ထားသောခြောက်သွေ့သော capacitor ဖြေရှင်းချက် ...
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း AC ရုပ်ရှင် capacitor
သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သော AC စစ်ထုတ်စက် capacitor （AKMJ-S）
CRE သည်ဤ AC type filter ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးသမားရိုးကျ AC filter ၏ပျက်ကွက်မှုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
Self-healing ခြောက်သွေ့သော capacitor element များကိုအထူးပြုလုပ်ထားသောလှိုင်းဖြတ်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PP film / PU သုံး၍ ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် self-inductance၊ မြင့်မားသောကွဲကွာနေသောခုခံနိုင်မှုနှင့်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကိုသေချာစေသည်။ Capacitor ၏ထိပ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုငြိမ်းသတ်နိုင်သော Eco-friendly epoxy ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ အထူးဒီဇိုင်းကအလွန်နိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို induction သေချာ။ CRE ၏ AC filter capacitor သည်လူကြိုက်များသောရထားများဖြစ်ခြင်း၊ power grid၊ power quality management နှင့် UPS application များတွင်အသုံးပြုသည်။
DC power supply ၏ output filter တွင် capacitor ၏အလုပ်သည်တတ်နိုင်သမျှ power ripple ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် DC ၏တန်ဖိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ AC-DC converters အားလုံးသည် linear supply များဖြစ်စေ၊ switching element အချို့ရှိစေကာမူ AC ဘက်မှအမျိုးမျိုးသော power ကိုယူပြီး DC ဘက်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ယန္တရားတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသော filter capacitor သည် AC ပါဝါသည် DC load မှလိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခါစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသိုလှောင်ရန်နှင့် AC ပါဝါသည်လိုအပ်သောပမာဏထက်နိမ့်သောအခါဝန်ကိုစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုသည်။
operating အပူချိန်အကွာအဝေး အပူချိန် Max.Operating, ထိပ်တန်း, max: + 85 ℃
အထက်အမျိုးအစားအပူချိန်: + 55 ℃
အောက်ပိုင်းအပူချိန်: -40 ℃
3 ×40μF~3 ×500μF
un / အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား
400V.AC/50Hz~1140V.DC / 50Hz
ဒု - t
2.15Un / 10S
1000 +2× Un V.AC 60S (min3000V.AC)
1.1Un (On-load-dur ၏ ၃၀% ။ )
1.15Un (တစ်ရက်လျှင် 30 မိနစ်)
၁.၂ ယူနစ် (၅ မိနစ် / တစ်ရက်)
၁.၃ ယူနစ် (၁ မိနစ် / တစ်ရက်)
1.5Un (တစ်ချိန်လျှင် ၁၀၀ မိနစ်၊ တစ်သက်တာအကြိမ် ၁၀၀၀)
tgδ≤0.002f= 100Hz
အမြင့် ၂၀၀၀ မီတာမှ ၅၀၀၀ မီတာအထက်သို့ရောက်သောအခါပမာဏလျှော့ချအသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
(တိုးမြှင့်မှုတစ်ခုစီအတွက် ၁၀၀၀ မီတာအတွက်ဗို့အားနှင့်လျှပ်စစ်အား ၁၀% လျှော့ချလိမ့်မည်)
100000h (Un; otshotspot≤55° C)
IEC 61071; IEC 60831;
ဗဓေလသစ်နှင့်တံဆိပ်ခတ် 1. သတ္တုအထုပ်,
2. ကြေးနီခွံမာသီး / ဝက်အူခဲ, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်;
3. ကြီးမားသောစွမ်းရည်, မြင့်မားသောပါဝါ;
၅။ မြင့်မားသောဂယက်ထနေသော၊ မြင့်သော dv / dt စွမ်းရည်ကိုခံနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကြိမ်နှုန်း converter ကိုနှင့် servo system ကိုစသည်တို့ကဲ့သို့သောအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှအသုံးချ။ ; CRE သည်လူသိများသော Siemens, Fuji Electric, LS စသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
UPS နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ switching power supply၊ အင်ဗာတာ power supply၊ ဆက်သွယ်ရေး power supply၊ ဂဟေစက် power supply၊ အထူး power supply, lighting နှင့်အခြားနယ်ပယ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ TBEA၊ Pansonic, Huawei စသည့်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
ဓာတ်လှေကားအမျိုးမျိုး၊ ဆိပ်ကမ်းစက်ပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဓာတ်လှေကားအမျိုးအစားများအတွက်၊ ၎င်းသည်မစ်ဆူဘီရှီကဲ့သို့သောလူသိများသောလုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စွမ်းအင်အသစ်မော်တော်ယာဉ်များစသည်တို့ကို CRE သည် CRRC၊ BJEV, JEE စသည့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်၊ ဘူမိစွမ်းအင်စသည်တို့ကဲ့သို့စွမ်းအင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အသစ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ CRE သည် TBEA၊ ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
defibrillator, X-Ray detector, ဆဲလ် proliferator
ဗို့အား un 400V.AC 50Hz
CN (μF) ဝ (မီလီမီတာ) T (mm) H (mm) dv / dt (V / μS) Ip (KA) Irms (က) ၅၀ ℃ ESR 1KHz (mΩ) rth (K / W) အလေးချိန် （ကီလိုဂရမ်
3 × 200 225 120 170 50 ၁၀.၀3× 703× 0.95 ၁.၁ 7
3 × 300 225 120 235 40 ၁၂.၀3× 903× 0,85 ၀.၈ 9
3 × 400 295 120 235 35 ၁၄.၀3× 1203× 0.80 ၀.၇ 12
3 × 500 365 120 235 30 ၁၅.၀3× 1603× 0.78 ၀.၆ 15
ဗို့အား un 500V.AC 50Hz
3 × 120 225 120 170 60 ၇.၂3× 50 ၃ × ၁.၂ ၁.၁ 7
3 × 180 225 120 235 50 ၉.၀3× 703× 1.05 ၀.၈ 9
3 × 240 295 120 235 45 ၁၀.၈3× 100 ၃ × ၁.၀ ၀.၇ 12
3 × 300 365 120 235 40 ၁၂.၀3× 1203× 0.9 ၀.၆ 15
ဗို့အား un 690V.AC 50Hz
3 × 50 225 120 170 100 ၅.၀3× 50 ၃ × ၂.၃ ၁.၁ 7
3 × 75 225 120 235 90 ၆.၈3× 70 ၃ × ၂.၁ ၀.၈ 9
3 × 100 295 120 235 80 ၈.၀3× 100 ၃ × ၁.၆ ၀.၇ 12
3 × 125 365 120 235 80 ၁၀.၀3× 120 ၃ × ၁.၃ ၀.၆ 15
ဗို့အား un 1140V.AC 50Hz
3 × 42 340 175 200 120 ၅.၀3× 80 ၃ × ၃.၃ ၀.၆ ၁၇.၃
3 × 60 420 175 250 100 ၆.၀3× 100 ၃ × ၂.၈ 0.5 26
ရှေ့သို့ ဝါယာကြိုးဆောင်နှင့်အတူမြင့်မားသောဗို့အား AC အရုပ်ရှင် capacitor
နောက်တစ်ခု: ဆလင်ဒါဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအပူပိုင်းအမျိုးအစား metalized ရုပ်ရှင် AC capacitor
ထုံးစံ - ဒီဇိုင်း AC အရုပ်ရှင် capacitors
ရုပ်ရှင် Capacitor တီထွင်မှု
metalized Self- အနာရောဂါငြိမ်းစရာရုပ်ရှင် Capacitor
ခေတ်သစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် AC filter အသစ် ...
ပါဝါ electr များအတွက်အမြင့်ဗို့အား AC ရုပ်ရှင် capacitor ...
AC filtering ကိုများအတွက် metalized ရုပ်ရှင် capacitor
အသစ်တီထွင်ထားသော metalized ပလပ်စတစ် AC film capacitor ...
Cylin ပါ ၀ င်သောခြောက်သွေ့သော metalized film AC capacitor ...
အဆင့်မြင့် embedded PCB capacitor ...